Adobe Lightroom Mobile wuxuu ku noqonayaa bilaash Android | Abuurista khadka tooska ah
Adobe Lightroom Mobile waa nooca yar ee barnaamijka loogu talagalay bixinta PC iyo Mac qaar ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan si isticmaale kasta uu uga raaxeysan karo taleefannadooda casriga ah, midkood oo leh Android ama ka hooseeya iOS.
On Android, barnaamijkan waxaa laga heli karay dhowr bilood, laakiin Diiwaangelinta Hal abuurka ah ee Cloud ayaa loo baahday inaad awood u yeelatid inaad marin u hesho oo aad gacantaada ku hayso mid ka mid ah qaybaha ugu fiican ee softiweer ee hadda laga heli karo barnaamijka 'Android app' iyo dukaanka ciyaarta fiidiyowga si aad wax uga beddesho sawirrada. Dhowr maalmood waxaad ka heli kartaa Lightroom Mobile gebi ahaanba bilaash adiga oo aan u baahnayn xisaab koronto abuure ah.
Waxay ku jirtaa nooca 1.4 in tan lagu daro dalab bilaash ah loogu talagalay dadka isticmaala Android. Taas macnaheedu waxa weeye in qof kastaa ka faa'iideysan karo abaabulka, tafatirka sawirrada iyo xirfadaha wadaagista ee noocani mobilka ahi bixiyo.
Ku rakibida barnaamijkan waad awoodi kartaa gala marinnada xulashada taas oo kuu ogolaaneysa inaad si weyn u maamusho midabka iyo codka midabka sawiradaada. Waqtigan xaadirka ah waa mid ka mid ah aaladaha ugu awooda badan ee ka jira Google Play Store, taas oo u dhiganta xitaa ka sareysa qaar sida Pixlr. Waxaa laga yaabaa inay yaraato waxqabadka, laakiin dhab ahaantii dhinacan waa la horumarin doonaa.
In kasta oo ay lacag la’aan tahay, haddana dadka adeegsada barnaamijka 'Cloud Cloud' ayaa awood u yeelan doona soo gal si aad u hesho isuduwaha faylalka iyada oo loo marayo aalado kala duwan, sidaa darteed waxaa looga gudbi karaa nooca mobilada oo leh sawir aan tafatirinayno, si aan ugu qaadno PC ama Mac iyada oo aan lumin waqtiga hawsha, kaliya waqtiga ay ku qaadaneyso in lagu rakibo sawirka la tifaftiray.
Fursad xiiso leh si ka faa iideyso si aad sawir uga sameysid aaladda Android. Waad soo dejisan kartaa laga soo xigtay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Adobe Lightroom Mobile waxaa laga heli karaa bilaash Android
Kaararka kirismaska ​​oo firfircoon